Shina Camshaft avo lenta sy mpamatsy | SAMOELA
Camshaft fiara avo lenta:
Modely azo ampiharina amin'ny fiara Volkswagen
modely 038109101R / 038109101AH
Hery hery 1000 (mPa)
Haben'ny fonosana * 500 * 20 20
Laharana lahatsoratra YD358A
Ny fitaovana dia vita amin'ny vy mahery ductile ary voatsabo amin'ny alàlan'ny teknolojia fanamafisana ny tany mba hanatsarana ny tanjaky ny havizanana amin'ny camshaft. Izy io dia mety amin'ny fiara, sambo, fiara enjeniera, milina fambolena, kalitao tany am-boalohany, miaraka amin'ny endrika bika, hakitroka avo, malama, famirapiratana ary faharetana aorian'ny famaranana. Ny vokatra tsirairay dia nandalo fitsapana henjana ary azo antoka ny kalitaony. Ny fonosana boaty dia manana endrika tsara sy tsingerina famokarana maharitra: 20-30 andro fiasana, fonosana tsy miandany / fonosana tany am-boalohany, fomba fitaterana: tany, ranomasina ary rivotra.
Izy io dia mety amin'ny fiara, sambo, fiara enjeniera, milina fambolena, kalitao tany am-boalohany.
Previous: Loha Cylinder avo lenta
Manaraka: Crankshafts Crankshaft fiara feno feno